Wararka - Sidee buu aamin u yahay xumbo dab-damis?
Dab-demiyeyaashu waxay isticmaalaan xumbada filim sameynta aqueque (AFFF) si ay uga caawiyaan daminta dabka u adkaysiga la dagaallanka, gaar ahaan dabka ku lug leh batroolka ama dareerayaasha kale ee ololi kara ‚ee loo yaqaan dababka Class B. Si kastaba ha noqotee, xumbooyinka dabka oo dhan looma aqoonsana inay yihiin AFFF.
Qaababka AFFF qaarkood waxay ka kooban yihiin nooc kiimiko ah oo loo yaqaan kiimikada loo yaqaan 'perfluorochemicals' (PFCs) tanina waxay dhalisay walaac ku saabsan suurtagalnimada wasakheynta biyaha dhulka hoostiisa ilaha laga helay isticmaalka wakiilada AFFF ee ay ku jiraan PFCs.
Bishii Meey 2000, ayaa Shirkadda 3M ayaa sheegay in aysan mar dambe soo saari doonin PFOS (perfluorooctanesulphonate) oo ku saleysan flurosurfactants iyadoo la adeegsanayo habka flouorination elektiroonigga. Tan ka hor, PFC-yada ugu caansan ee loo adeegsado xumbo-dabka waxay ahaayeen PFOS iyo noocyadeeda.
AFFF waxay si dhakhso leh u damisaa dabka shidaalka, laakiin waxay ka kooban yihiin PFAS, oo u taagan walxaha per-iyo polyfluoroalkyl. Qaar ka mid ah wasakheynta PFAS waxay ka timid isticmaalka xumbo-dabka. (Sawir / Saldhig Wadajir ah San Antonio)
Iyadoo la tixgelinayo 'caadiga cusub' ee qalabka dabka
Durdurka sunta ah ee 'foam foam' oo u dhow Detroit wuxuu ahaa PFAS - laakiin xaggee laga keenay?
Xumbo dabka loo isticmaalo tababarka Conn. Waxay sababi kartaa caafimaad darro, khataro deegaanka ah
Intii lagu jiray dhowrkii sano ee la soo dhaafay, warshadaha xumbada dab-demiska ayaa ka fogaaday PFOS iyo waxyaabaha ka dhasha sababo la xiriira cadaadiska sharci dejinta. Soo saarayaashaasi waxay soo saareen oo ay keeneen suuqa xumbo dab-damiska aan isticmaalin fluorochemicals, taas oo ah, kuwa aan lahayn fluorin-ka.
Soosaarayaasha xumbooyinka aan lahayn fluorine-ka ayaa sheegaya in xumbooyinkan ay saameyn yar ku leeyihiin deegaanka ayna la kulmaan ogolaanshaha caalamiga ah ee shuruudaha la dagaalanka dabka iyo rajooyinka isticmaalaha dhamaadka. Si kastaba ha noqotee, waxaa wali jira walaac xagga deegaanka ah oo ku saabsan xumbo la-dagaallanka dabka iyo cilmibaaris ku saabsan mowduuca oo sii socda.
MA KA WALWAYN ISTICMAALKA AFFF?
Xarunta tabashooyinka ayaa ku xeeran saameynta xun ee ay ku yeelan karto deegaanka ka imaadka xalalka xumbada (isku dhafka biyaha iyo xumbada isku urursan). Arimaha aasaasiga ah waa sunta, nooleynta, adkeysiga, daaweynta dhirta daaweynta biyaha wasaqeysan iyo nafaqeynta carada carrada. Kuwaas oo dhami waxay sababaan walaac marka xalalka xumbadu gaadhaan nidaamyada biyaha dabiiciga ah ama guryaha.
Marka PFC-ku jira AFFF si isdaba joog ah loogu isticmaalo hal meel muddo dheer, PFC-yada waxay ka guuri karaan xumbada carrada ka dibna waxay geli karaan biyaha dhulka hoostiisa. Qaddarka PFCs ee gala biyaha dhulka hoostiisa waxay kuxirantahay nooca iyo xaddiga AFFF loo adeegsaday, meeshii lagu isticmaalay, nooca carrada iyo arrimo kale.
Haddii ceelasha gaarka loo leeyahay ama kuwa guud ay ku yaalliin meel u dhow, waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan PFCs meeshii laga isticmaali jiray AFFF. Waa kuwan waxa Wasaaradda Caafimaadka ee Minnesota daabacday; waxay ka mid tahay dhowr gobol tijaabinta faddarayn.
“Sanadihii 2008-2011, Wakaaladda Xakamaynta Wasakhda Minnesota (MPCA) waxay ku tijaabisay carrada, biyaha dusha sare, biyaha dhulka hoostiisa, iyo dhagxaanta meelaha iyo agagaarka 13 goobood ee AFFF ee ku baahsan gobolka. Waxay ka ogaadeen heerarka sare ee PFC-yada goobaha qaarkood, laakiin xaaladaha intooda badan faddaraynta ma aysan saameynin aag ballaaran ama waxay khatar ku tahay aadanaha ama deegaanka. Saddex goobood - Saldhigga Difaaca Cirka ee Duluth, Madaarka Bemidji, iyo Akadeemiyadda Tababbarka Dabka ee Galbeedka - ayaa lagu aqoonsaday halka PFCs ay ku faafeen meel aad ugu filan in Waaxda Caafimaadka ee Minnesota iyo MPCA ay go'aansadeen in ay tijaabiyaan ceelasha degaanka u dhow.
“Tani waxay u badan tahay inay ka dhacdo meelaha u dhow halka PFC ay ku jirto AFFF marar badan loo isticmaalay, sida aagagga tababarka dabka, garoomada diyaaradaha, warshadaha sifeynta, iyo dhirta kiimikada. Waxay u yar tahay inay ka dhacdo isticmaalka hal-mar ee AFFF si loola dagaallamo dabka, illaa mooyee in tiro badan oo AFFF ah aan la isticmaalin. In kasta oo dab-bakhtiiyeyaasha la qaadan karo ay isticmaali karaan AFFF ay ku jirto PFC, hal mar oo aad u isticmaasho intaas in le'eg ayay u egtahay inaysan khatar ku ahayn biyaha dhulka. ”
Dareerida xumbada / xalka biyaha waxay u badan tahay natiijada mid ama in ka badan oo ka mid ah xaaladaha soo socda:
Hawlgallada dab-demiska gacanta ama hawlgallada buste-shidaalka;
Layli tababbaran oo xumbada loogu isticmaalayo xaaladaha;
Nidaamka qalabka xumbada iyo tijaabooyinka gawaarida; ama
Siidaynta nidaamka go'an.
Meelaha mid ama ka badan dhacdooyinkan ay u badan tahay inay ka dhacaan waxaa ka mid ah tas-hiilaadka diyaaradaha iyo tas-hiilaadka tababarka dab-damiska. Xarumaha khaaska ah ee halista ah, sida bakhaarada alaabta ololi kara / halista leh, xarumaha kaydinta dareeraha ee ololi kara iyo meelaha lagu keydiyo qashinka halista ah, ayaa sidoo kale liiskan ku jira.
Aad baa loo jecel yahay in la soo ururiyo xalalka xumbada ka dib isticmaalkeeda howlaha dab-demiska. Ka sokow qaybta xumbada lafteeda, xumbadu waxay u badan tahay inay ku sumoobeen shidaalka ama shidaalka ku jira dabka. Dhacdo walxaha halista ah oo caadi ah ayaa hadda la jebiyey.
Xeeladaha xakamaynta Buugga ee loo isticmaalo daadinta ku lug leh dareeraha halista ah waa in la shaqeeyaa marka xaaladaha iyo shaqaaluhu oggolaadaan. Kuwaas waxaa ka mid ah xannibaadda daadadka duufaanka si looga hortago in xumbada / biyaha wasakhaysan ee wasakhaysan ay galaan nidaamka biyaha qashinka ama deegaanka aan la hubin.
Xeeladaha difaaca sida waxyeelaynta, leexinta iyo leexinta waa in loo shaqeeyaa si loo helo xumbada / biyaha xalka aag ku habboon xakamaynta illaa laga saarayo qandaraaslaha nadiifinta walxaha halista ah.
Waxaa jira xumbooyin tababar oo si gaar ah loo qorsheeyay oo laga heli karo inta badan soo saarayaasha xumbada sameeya AFFF inta lagu jiro tababarka tooska ah, laakiin kuma jiraan flourosurfactants sida PFC. Xumooyinkan tababarku sida caadiga ah waa kuwo baaba'a oo waxay leeyihiin saamayn yar oo deegaanka ah; sidoo kale waxaa si badbaado leh loogu diri karaa warshadda lagu daweeyo biyaha wasakhda ah si ay u farsameeyaan
Maqnaanshaha flourosurfactants ee xumbada tababarka waxay ka dhigan tahay in xumboyinkaasi ay leeyihiin iska caabin dhabarka gubashada ah. Tusaale ahaan, xumbada tababbarku waxay bixin doontaa caqabad uumi-bax ah oo bilow ah oo ku jirta dabka dareeraha ololi kara ee dabku dhaliyo, laakiin bustaha xumbada ayaa si dhakhso leh u burburaya.
Taasi waa wax wanaagsan macallinka aragtidiisa maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay inaad sameyn karto dhacdooyin tababarro badan maxaa yeelay adiga iyo ardaydaada ma sugaysid jilitaanka tababarka inuu mar labaad gubasho diyaar noqdo.
Jimicsiyada tababarka, gaar ahaan kuwa isticmaala xumbada dhabta ah, waa inay ku jiraan qodobo ku saabsan aruurinta xumbada la qaatay. Uguyaraan, goobaha tababarka dabka waa inay lahaadaan awood ay kuqaadan karaan xalka xumbo ee loo adeegsaday duruufaha tababarka si loogu daayo xarunta daaweynta biyaha wasakhda ah.
Ka bixidaas kahor, xarunta daaweynta biyaha wasakhda ah waa in lala socodsiiyaa oo ogolaansho la siiyaa waaxda dabka si wakiilka loogu sii daayo qadar cayiman.
Xaqiiqdii horumarka ka imanaya nidaamyada soo-saarista ee fasalka A (iyo malaha kiimikada wakiilka) ayaa sii wadi doonta inay horumariso sidii ay ahayd tobankii sano ee la soo dhaafay. Laakiin marka la eego xumbada fasalka B, dadaalada horumarinta kiimikada wakiiladu waxay umuuqdaan in la xayiray waqtigii lagu tiirsanaanta tikniyoolajiyadaha jira.
Kaliya tan iyo markii la soo saaray xeerarka deegaanka tobankii sano ee la soo dhaafay ama wixii la mid ah AFFFs ku saleysan fluorine ayay soosaarayaasha xumbada dabka la dagaallamaya u arkeen caqabadda horumarka si dhab ah. Qaar ka mid ah badeecadaas aan fluorine-ku-jirin waa jiilkii koowaad iyo kuwo kale jiil labaad ama saddexaad.
Waxay sii wadi doonaan inay u xuubsiibtaan labadaba kiimikada wakiilka iyo waxqabadka dab-damiska iyadoo ujeedadu tahay in lagu gaaro waxqabad sare oo ku saabsan dareeraha ololi kara iyo kuwa guban kara, hagaajinta iska caabbinta-gubashada ee badbaadada dab-demiyeyaasha waxayna siisaa sanado badan oo dheeri ah nolol badbaado badan xumbo laga soo saaray borotiinka.